I-Taringa, i-Yonkis Series nama-Yonkis Movie abandakanyeka odabeni lwe Megaupload | Kusuka kuLinux
ITaringa, Yonkis Series namaYonkis Movie abambe iqhaza odabeni lweMegaupload
Umsebenzisi umabhebhana uthumele ku-Scribd a ukuskena we ukumangalelwa igcwaliswe nguHulumeni wase-United States. Phakathi kwezinye izinto, ikhuluma ngamasayithi athandwayo eLatin America njenge: I-Taringa, i-Yonkis Series nama-Yonkis Movie njengengxenye “yozungu olukhulu” (amakhasi 6, 40, 41 no-50).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » ITaringa, Yonkis Series namaYonkis Movie abambe iqhaza odabeni lweMegaupload
kepha ngokwazi kwami, i-taringa ine-server yayo e-Argentina futhi abakwazi ukwenza lutho kuyo, noma ngabe nginephutha?
Kungakuhle uma amasayithi afana noTaringa eyeka ukuzinikela ebugebengwini!. Ngiyavuma ukuthi kunesikhathi lapho ngangilanda khona okuqukethwe (Umculo, amaDokhumentari athile, njll ...) kepha manje ngiyazama ukungakwenzi. Abalimazi nje kuphela Abadali bokuqukethwe abancane / abaphakathi, kepha futhi nabahleli bewebhu, ngokukopisha nokunamathisela konke okuthunyelwe ngaphakathi kwesiza !!. Kuyinto eyodwa ukuyixhumanisa nge-Links / trackbars (noma yini), nenye into ukuphindaphinda imininingwane, futhi ngaphandle kokukhomba umthombo kwesinye isikhathi.
Ngake ngabhala ngalezi zinhlobo zamasayithi http://goo.gl/x75qK, ngoba uma uzibeka endaweni yomhleli, uyabona ukuthi wenzani.
U-Alejandro Saldaña Magaña kusho
Kungakho nje kungenzekanga lutho nge-taringa, yize okuqukethwe kubulewe.
Phendula ku-alejandro saldaña magaña
Iwayini: Iyasiza noma iyavimba?
UNginx usezodlula i-Internet Information Server (IIS)